Faah faahin:- Weerar bambooyin ah oo xalay lagu qaaday guri ay degan yihiin mas’uuliyiin ka tirsan dowladda – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar bambooyin ah oo xalay lagu qaaday guri ay degan yihiin mas’uuliyiin ka tirsan dowladda
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa weerar bambooyinka gacanta laga tuuro loo adeegsaday oo habeenkii xalay lagu qaaday guri ay magaalada Muqdisho ka degan yihiin mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Weerarkaasi oo gaarayay ilaa 2 bambo-gacmeed ayaa lagu weeraray guriga uu degan yahay wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku geeriyooday 1 qof oo shacab ah, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay ilaa 4 kale oo ahaa ilaalada mas’uuliyiinta weerarka lagu qaaday.
Guriga wasiiru dowlaha wasaarada gaashaandhiga Maxamed Cali Xagaa ee ku yaala degmada X/weyne ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa deganaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, mana jirin wax qasaare ah oo soo gaaray mas’uuliyiintaas.
Dhinaca kale, taliyaha ciidanka booliska ee saldhiga degmada X/weyne C/qaadir Axmed Shire oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkaasi loo qabtay ilaa 4 qof oo looga shakisan yahay inay weerarkaasi ku lug leeyihiin, balse ay baaritaano ku socdaan.
Wuxuu taliyaha sidoo kale sheegay in 4-ta qof ee weerarka bambaanooyinka ah loo qabtay laga soo qabtay meel u dhaw guriga weerarka lagu qaaday uu degan yahay wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa.